Dhakhaatiirtii Turkiga ahayd ee muddada hawlaha caafimaad ka waday Puntland oo maanta Bossaso gaaray. – Radio Daljir
Dhakhaatiirtii Turkiga ahayd ee muddada hawlaha caafimaad ka waday Puntland oo maanta Bossaso gaaray.
Bossaso, Sept 27 – Wafdi dhaqaatiir ah oo u dhashay dalka Turkiga oo muddooyinkii ugu dambeeyay hawlo caafimaad ka waday isbitaalka wayn ee magaalada Gaalkacyo ayaa maaanta soo gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, si ay adeegyo caafimaad oo isugu jirta qalliin iyo daawayn lacag la’aan ah ay uga sameeyaan gobolka.
Wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Cali Cabdilaahi Warsame, oo hoggaaminayay wafdiga ayaa saxaafadda u sheegay in dhaqaatiirta ay adeegyada caafimaad ay ka sameeyeen isbitaalka magaalada Galkacyyo, ayna ka faa’iidaysteen 1,213 bukaan ah, islamarkaana ay ku guulaysteen qalliimo culus iyo kuwa fudud oo ay u sameeyaan 85 qof oo qabay xanuuno kale duwan.
Waxaa uu sheegay in magaalada Boosaaso-na in ay uga qorshaysan tahay ka fulinta adeegyo caafimaad oo ka baaxad-wayn kuwii horay looga sameeyeen isbitaalka magaalada Gaalkacyo, isagoona intaasi raaciyay in 28-ka bishan ay rajaynayaan in dhaqaatiir kale ay soo gaari doonaan caasimadda Puntland ee Garoowe.
Mid ka mid ah dhaqaatiirta Turkiga ee soo gaaray Boosaaso oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay inay garab taaganyihiin walaalahooda Soomaliyeed islamarkaana ay sii wadi doonaan taageerada ay u fidinayaan shacabka Soomaliyeed ee dhibaataysan.
Guddoomiyaha gobolka Bari iyo duqa degmada Boosaaso oo dhaqaatiirta Turkiga kusoo dhaweeyay magaalada Boosaaso ayaa uga mahadceliyay kaalinta ay dawladda Turkigu ka qaadanayso horumarinta bulshada Soomaliyeed iyo taageerada siinteeda.
Dhaqaatiirta Turkiga ee soo gaaray magaalada Boosaaso ayaa lagu wadaa inay muddo saddex maalmood ah isbitaalka magaalada Bossaso ka fuliyaan adeegyo caafimaadka oo iskugu jira qalliimo iyo baaritaanno.